के भएको हो झलनाथलाई ? « नेपालबहस
के भएको हो झलनाथलाई ?
प्रकाशित मिति : २ असार २०७८, बुधबार १३:१७
२ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल दुई साता अघि मात्रै कोरोना संक्रमणको उपचार गरी नर्भिक अस्पतालबाट घर फर्किएका थिए । राम्रोसँग तंग्रिनसमेत नपाएका खनाल फेरि बिरामी परेका छन् । लगभग एक साताभन्दा बढी उनलाई उच्च ज्वरो आयो । पीसीआर गर्दा रिपोर्ट भने नेगेटिभ आयो ।
तर उनको ज्वरो ओर्लिएन । अनि मात्र खनाललाई उपचारका लागि हिजो नर्भिक अस्पताल पु¥याइयो । दुई दिन उपचार गर्दासमेत खनालको स्वास्थमा उल्लेख्य सुधार भएको छैन । डाक्टरहरुले थप उपचारका लागि भारतको नयाँ दिल्ली लैजान सिफारिश गरेका छन् । विगतदेखि नै खनाले दिल्लीस्थित एपोलो अस्पतालमा उपचार गर्दै आएका छन् ।
नर्भिक अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ परीक्षणमा खनालको पोष्ट्रेट ग्रन्थी बढेको देखियो । साथै, रगतमा हेमोग्लोबिनको मात्रा पनि घटेको अस्पताल स्रोतले बताएको छ । खनालको मृगैलामा पनि खराबी देखिएको डाक्टरहरुले जनाएका छन् ।
आजै थप उपचारका लागि खनाल नयाँ दिल्ली जानअघि पार्टी महासचिब इश्वर पोखरेलले भेटेका छन् । भेटमा पोख्रेलले खनालको स्वास्थ अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए । साथै, शीघ्र स्वास्थ लाभको कामनासमेत गरेका थिए ।
खनालले पनि पार्टी भित्रको समस्याको हल खोज्न पोखरेललाई भूमिका खेल्न आग्रह गरेका थिए । जवाफमा पोखरेलले तपाईं फर्किएपछि थप सल्लाह गरौंला भनेको अस्पताल स्रोतले बतायो ।
अस्तव्यस्त टिचिङ अस्पतालः बिरामीका आफ्नै समस्या, क्यास काउन्टरमा कुरुवाका पीडा